Angase azuze uR300 million owengoma yonyaka
U-Owen Ndlovu omise ukumenyezelwa kweTop 10 nengoma yonyaka oKhozini. Isithombe: Twitter
THOKOZANI NDLOVU | January 6, 2020
USOMABHIZINISI omise ukumenyezelwa kwengoma yokuhlukanisa unyaka, ohlelweni iTop 10 loKhozi FM,u-Owen Ndlovu, angase ahlomule ngoR300 million uma ewina icala noma uma bevumelana neSABC njengoba kunezinkulumo ezithi bangase bavumelane ngaphandle kwenkantolo.
Kuthiwa uhlelo lokuvotela ingoma yonyaka belwenza imali elinganiselwa ku-R100 million ngonyaka kodwa iMichael Owen Production yagcina ukuthola imali ngawo ngo-2016.
Sekuphele iminyaka emithathu le nkampani ingahlomuli nesenti, ngokusho kukaNdlovu. Uthi kwaSABC bese beshintshe ngisho nolayini wokuvota, engasakwazi ukubona ukuthi kwenzekani ngohlelo lokuvota njengoba kubhalwe kwinkontileka emhlanganisa neSABC.
Le mali akhuluma ngayo uNdlovu itholakala ngokuhlanganisa amavoti eziteshi zemisakazo eziwu-18 zakwaSABC eyenzeka uma abantu bethumela imiqhafazo. Kubalwa neziteshi zethelevishini ezine nabaxhasi.
Kuleli sonto iGroup Executive yeSABC Radio, uNada Wotshela ucashunwe ezindabeni ethi bazimisele ngokwenza yonke imizamo yokuxazulula udaba oluphakathi kweSABC noNdlovu.
UNada ubekhuluma ezindabeni, waveza nokuthi bacabanga ukuba nesivumelwano abazosenza noNdlovu ngaphandle kwenkantolo, ukuze kungadungeki ubudlelwano abanabo naye nokuvikela isithunzi seSABC.
UNdlovu uthe ulinde ukuzwa ngabo uma bezimisele ngokuxoxa naye.
“Kangiyiboni inkinga uma befuna ukuthi sixoxe kodwa ngeke kube yimina oya kubona. Ngilinde ukuthi bakhulume bese kuyabonakala ukuthi kukhona yini esivumelana ngakho. UNada uyisikhulu esiphezulu kwaSABC futhi wuyena obhalwe encwadini efungelwe ngecala engilifake enkantolo ngokudliwa kwamandla ami. Nezingxoxo ebengiba nazo ngeSABC Summer Song beziba phakathi phakathi kwami naye noMadoda Mxakwe,” kusho uNdlovu.
Yize uNada Wotshela egcizelele ngesikhathi ekhuluma ezindabeni ukuthi banesifiso sokuxoxa noNdlovu ngaphandle kwenkantolo kodwa okhulumela iSABC obambile, uMmoni Seapolelo, ukuchithile lokho.
“ I-SABC ithanda ukugcizelela ukuthi lolu daba lusenkantolo, kazikho izinhlelo zokuthi luxazululwe ngaphandle kwenkantolo. Njengoba udaba lubuyela enkantolo ngoFebhuwari 10, sizoyekela yona yenze umsebenzi wayo.
“I-SABC ifuna ukuphinda iqinisekise ukuthi ibinesivumelwano seminyaka emithathu noNdlovu, esiphele ngoMashi nyakenye. Imisakazo yakwaSABC ibilokhu inayo imiqhudelwano yengoma yonyaka, kakuyona into entsha.
Ngalokho simile ekutheni lolu daba luzoxazululwa yinkantolo ngendlela ezogculisa iSABC nomphakathi,” kusho uMmoni.
UNdlovu uthe kuyiqiniso ukuthi isivumelwano besiphela ngoMashi nyakenye kodwa kuneminyaka ayikweletwa yiSABC.
“Isivumelwano ebenginaso neSABC saqala ngo-2016 kuya ku-2019. Ngo-2017 kwaSABC bangitshela ukuthi ayizomenyezelwa iSABC Summer Song ngoba basacubungula yonke imicimbi yakhona ukuthi ihanjiswa ngendlela. Bathola ukuthi owami kawunankinga futhi bangazisa. Ngo-2018 bathi yonke isaqhubeka njengokwesivumelwano kodwa bathi yonke imiklomelo mangiyinike bona ukuze baqhubeke nokuwinisa abantu. Ngenza kanjalo.
“Eminye bacela ukuthi ngibanike yona ngo-Ephreli nyakenye sesiphelile vele isivumelwano, okusho ukuthi besisasebenzisana, bathembisa ukuthi bazongithinta ngokuzokwenzekayo njengoba iqhubeke nokusebenzisana sekudlule isivumelwano. Kodwa kwacweba iziziba emva kwalokho,” kuqhuba uNdlovu.
Uthe wazama ukulandelela ukuthi kwenzekani njengoba beqhubeka bengasamthinti ekubeni kunenkontileka abanayo eqinisekisa ukuthi wumcimbi wakhe lo, abayisayina neSABC kodwa bangamphendula.
Uthe baze bashintsha nolayini wokuthumela imiqhafazo uma abantu bevota, ukuze angabe esabona okwenzekayo. Nakhona wababuza bangasho lutho.